Had iyo jeer waa wax la yaab leh in la arko sida khilaafaadka khiyaanada leh ee wicitaanka ficilku ay saameyn aad u ballaaran ugu yeelan karaan heerarka gujinaya-dhexdooda iyo beddelaadyada. Mid ka mid ah meelaha Hubspot taas uma maleynayo in dad badan oo si buuxda uga faa'iideysanaya ay tahay qeybtooda Wicitaan-Wax-qabad.
Waxaad ku ogaan doontaa hal wicitaan ficil ah oo ku saabsan 'Martech' hoosta hoose ee sadarka bidix. Waxaan tijaabinay seddex nooc oo isugu mid ah wacitaan-u-ficil. Farriinta ayaa sideedaba isku mid ahayd, laakiin midabka waannu ku kala duwanaanay. Mid wuxuu ahaa asal madow oo aad uga soo horjeedda bogga kan kalena wuxuu u dhawaa inay isku mid yihiin - oo midabbada badhanka uun beddela.
Kani waa tijaabo yar oo aan kaliya ku kala duwanaanay midabada… waan sii wadaynaa tayadoodii CTA oo leh noocyo kala duwan oo midabbo badan leh oo imtixaannada kala duwani ay si dhab ah ugu habboon yihiin natiijooyinka. Waxaan sidoo kale garwaaqsan nahay xaqiiqda ah in qiimaha guud ee gujintu uu aad u hooseeyo, sidoo kale… waxaan haysannaa shaqo aan ku qabanno whee oo aan soo bandhigno CTA-gaan. Waxay ku jirtaa meel adag oo aan had iyo jeer ku habboonayn waxyaabaha ku xeeran.